बहुप्रतिक्षित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको सुरुवात
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)ले कात्तिक २० गते मंगलबारदेखि बहुप्रतिक्षित पूर्ण स्वचालित अनलाईन कारोबार प्रणाली सुरुवात गरेको छ । योसँगै कुनै बेला कागजको भरमा कारोबार हुने नेपालको सेयरबजार पूर्ण रुपले स्वचालित र अत्याधुनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक भव्य समारोहका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज...
अनलाइन प्रणाली थालनीको पूर्वसन्ध्यामा दोहोरो अंकको उछाल, प्रभूमा झुम्मिए लगानीकर्ता
काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको औपचारिक थालनीको अघिल्लो दिन सेयर बजारमा दोहोरो अंकको उछाल आएको छ । यसलाई पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीप्रति लगानीकर्ताको विश्वासको रुपमा हेरिएको छ । भन्दै आएजस्तो अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीले सेयर बजारको विकास र बिस्तार गर्दै दायरा फराकिलो बनाउन सकेन भने...
कात्तिक २० देखि सेयरको अनलाइन कारोबार, याक एण्ड यतिबाट उद्घाटन हुने
काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली कात्तिक २० गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले कात्तिक २० गते बजार खुल्नुअघि नै एक भव्य समारोहका बीच पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको उद्घाटन गरिनेछ । कात्तिक २० गतेको कारोबारबाट नै लगानीकर्ताले अनलाइन...
मक ट्रेडिङ सकियो, तिहारअघिदेखि अनलाइन सेयर कारोबार
काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको मक ट्रेडिङ सकिएको छ । योसँगै नेप्सेले अनलाइन कारोबार प्रणाली तिहारअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । नेप्सले एक सूचना प्रकाशित गर्दै असोज २ गतेदेखि सुरु भएको मक ट्रेडिङ सकिएको प्रष्ट पारेको हो । योसँगै पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी...
सेयरको अनलाइन कारोबार कात्तिकभित्रै, ब्रोकरलाई तालिम सुरु
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । बहुप्रतिक्षित पूर्ण अनलाइन सेयर कारोबार प्रणाली प्रणाली कात्तिकभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी सबै तयारी पूरा भइसकेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार नेप्सेले अनलाइन कारोबार प्रणालीको सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ । बुधबार(आज)देखि...
मक ट्रेडिङमा किन असहयोग गर्दैछन् लगानीकर्ता र ब्रोकर ?
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौं । असोज २ गतेदेखि सञ्चालन आएको मक ट्रेडिङमा नेप्सेको सक्रियता रहँदा रहँदै पनि लगानीकर्ताहरु भने अलमलमा परेका देखिएको छ । नेप्सेले बेला–बेलामा विज्ञप्ति, म्यानुअल र भिडियो ट्युटोरियल राखेर लगानीकर्ताहरुलाई मक ट्रेडिङ्गका बारेमा जानकारी गराएको र सेयर लगानीकर्ता संघका नेताहरुलाई बोलाएर तालिम समेत...
काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीका लागि आफ्नो अलग्गै डाटा सेन्टर राख्नुपर्ने र त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीतिबाट नेप्से पछाडि हटेपछि मध्यमार्गी बाटोबाट जाने सहमति बनेको छ । अनलाइन कारोबार प्रणालीका लागि आवश्यक डेटा सेन्टरको बिषयमा लामो समयदेखि नेप्से र ब्रोकरबीच विवाद हुँदै आएको थियो...
कात्तिक १५ देखि अनलाइन कार्यान्वयनका लागि तयार रहन ब्रोकरलाई नेप्सेको आग्रह
काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको मोक ट्रेडिङ चलिरहेको छ । अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनको पूर्वसन्ध्यामा जारी मोक ट्रेडिङले अझै लय समात्न सकेको छैन । भद्रगोल अवस्थाका बीच अपेक्षाभन्दा निकै कम लगानीकर्ताले मात्र मोक ट्रेडिङमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । मोकमा देखिएको भद्रगोलको व्यवस्थापन नभइरहेको बेला नेपाल स्टक...
मोक ट्रेडिङमा बग्रेल्ती समस्या आएको नेप्सेको स्वीकारोक्ति, तर दोष भने ब्रोकरमाथि !
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले मोक ट्रेडिङमा धेरै समस्या आएको स्वीकार गरेको छ । तर उसले घुमाउरो ढंगले मोकमा आएको समस्याको दोष ब्रोकर र उनीहरुका क्लाइन्ट(लगानीकर्ता)माथि थोपरेको छ । नेप्सेले शुक्रबार सबै ब्रोकरहरुको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो आरोप लगाएको छ भने समस्या समाधानका लागि केही टिप्सहरु समेत दिएको छ ।&nbs...
मोक ट्रेडिङमा अत्यधिक समस्यापछि नेप्सेद्वारा प्रत्येक ब्रोकरलाई अलग यूआरएलको व्यवस्था
काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको पूर्वसन्ध्यामा थालिएको मोक ट्रेडिङमा अत्यधिक समस्या आएपछि नेप्सेले सबै ब्रोकरलाई अलग–अलग यूआरएल उपलब्ध गराएको छ । लगानीकर्ताले मोक ट्रेडिङको नाममा नेप्सेले झुक्याउने र झुलाउने काम मात्र गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्न थालेपछि र मोकका लागि ब्रोकरलाई उपलब्ध गराइएको...
मोक ट्रेडिङमा के समस्या आयो ? नेप्सेलाई इमेल गर्नुहोस्
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेडले मोक ट्रेडिङको बिषयमा लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरुबाट फिडब्याक मागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पूर्ण स्वचालित अनलाईन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अन्तिम चरणको कार्यको रुपमा मोक ट्रेडिङको कार्य मंगलबारदेखि सुरु गरेको हो । यही सन्दर्भमा नेप्सेले लगानीकर्ताबाट मोक...
दशैंअघि नआउने भो सेयर कारोबारमा अनलाइन प्रणाली !
काठमाण्डौ । बहुप्रतिक्षित पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली दशैंअघि नआउने भएको छ । मोक टेस्टिङमा भएको ढिलाई, नेप्सेलाई ब्रोकरहरुले गरेका असहयोग, सरकारले नेप्से प्रमुख चन्द्रसिंह साउदको नियुक्ति बदर गरेपछि उत्पन्न परिस्थिति, नेप्सेभित्रै भएको केही गडबडी र सिस्टमको खराबी लगायतका कारणले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली...
अनलाइन प्रणालीको मोक टेस्टिङ सुरु, यस्तो छ यूजर म्यानुअल
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको मोक टेस्टिङ सुरु भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले अनलाइन कारोबार प्रणालीका प्रमुख सरोकारवालासहित सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मोक टेस्टिङ सुरु भएको उल्लेख गरेको हो । सोही पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेप्सेले मोक टेस्टिङको यूजर म्यानुअल समेत...
अनलाइन प्रणालीको मोक परीक्षण आउने साता: सिडिएससी पनि तयारी अवस्थामा
काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको मोक टेस्टिङ आउने साता हुने भएको छ । डेटा सेन्टरको हार्डवेयरले काम नगरेपछि अघिल्लो साता नै सुरु हुने भनिएको मोक टेस्टिङ केही ढिला भएको नेप्सेका प्रमुख चन्द्रसिंह साउदले दाबी गरेका छन् । ‘डेटा सेन्टरको हार्डवेयरमध्ये केहीले काम गरिरहेको छ, केहीमा समस्या देखिएको छ ।’ उनले...
अनलाइनको परीक्षण सकियो, मोक यही साता
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । बहुप्रतिक्षित पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको परीक्षण लगभग पूरा भएको छ । सकेसम्म यही साताको अन्तबाट कन्फिडेन्टका लागि मोक टेस्टिंग सुरु हुने र त्यसको केही समयभित्रै पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने नेप्सेका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । प्रविधिलाई विकासको निशर्त...